Tiradii ugu badneyn oo la helay COVI19 Itoobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Tiradii ugu badneyn oo la helay COVI19 Itoobiya
itoobiya Labaatan iyo sagaal (29) dad ka badan ayaa laga helay cudurka ‘COVID19’ 24kii saacadood ee ugu dambeeyay, waana tiradii ugu badneyd hal maalin oo la diiwaan geliyey tan iyo markii ugu horreysey ee lagahelo dalka Ethiopia bishii march 13.
2171 tijaabooyin shaybaar ayaa la sameeyay 24-kii saac ee la soo dhaafay taas oo wadarta guud ee tijaabooyinka shaybaarka lagu sameeyay ilaa 34, 860. Natiijooyinka maanta ayaa keenaya tirada guud ee la xaqiijiyey ee bukaannada COVID-19 ee gudaha Itoobiya, kuwaas oo 99 ka soo kabsaday 5na ay dhinteen.
Tirada bogsatey ayaa gaadhey 99 oo ka bogsadey ka dib markii labo bukaan oo kale ay bogsadeen 24-kii saac ee la soo dhaafay.
Waxaa taas ka sii muhiimsan, warbixintii maanta waxay muujineysaa in 21 ka mid ah 29-kii kiis ay xiriir la leeyihiin kiisas hore, taasoo caddeyn u ah in gudbinta bulshada ay sare u sii kaceyso. Kaliya sideed (8) ayaa leh taariikhda safarka dibedda.
Wadarta guud ee 29, 21 ayaa ka socda caasimada #AddisAbeba, iyo toddobo (7) waxay ka yimaadeen xarunta karantiil ee gobolka Soomaalida. Mid wuxuu ka yimid magaalada #Adama ee #Oromia waxaana lagu ogaadey ilaalin ku saleysan bulshada. Dhammaantood waa rag da’doodu u dhaxayso 15 ilaa 45 sano jir.
Previous articleDadka qaba xanuunka COVID19 OO kun kor u dhaafey Soomaaliya
Next articleWasaarada waxbarashada somaliland oo Dacwad ka gudbisey digsiyo sharciga jabiyey COVId19